China Yekumhanyisa multicolor multifunction maindasitiri inkjet ceramic ndiro yekudhinda muchina vagadziri uye vanotengesa | Ntek
Yekumhanyisa multicolor multifunction maindasitiri inkjet ceramic ndiro yekudhinda muchina
Chigadzirwa Muenzaniso YC2513
Dhinda Dhinda Tekinoroji Kudonhedza-kudiwa piezo magetsi
Kudhindisa musoro Dhinda remusoro wemagetsi isoftware inogadziriswa
Dhinda remusoro Ricoh Gen5
Dhinda musoro wekudhinda 2-8
Ink Unhu UV Kurapa Ink
Ingi matura Refillable pane iyo nhunzi uchidhinda / 1000ml pavara
Akatungamirira UV Lamp anodarika makumi maviri emaawa-hupenyu hupenyu
Ruvara Kudzora ICC based color, curves uye density kugadziridza
Dhinda rekudhinda CMYK W Varnish sarudzo 10-12sqm / h
Kuchenesa Sisitimu Otomatiki Kuchenesa Sisitimu, Otomatiki Dry-inodzivirira Sisitimu
Tungamira Njanji Taiwan HIWIN
Kushanda Tafura Vacuum Kuyamwa
Kukura Kwekudhinda 2500 * 1300mm
Dhinda Chinyorwa USB2.0
Media Kukora 0-100mm
Dhinda Resolution 360dpi, 720dpi, 1440dpi, 2160dpi
Hupenyu hwemufananidzo wakadhindwa Makore matatu (kunze), 10years (zvemukati)
Fomati Fomati TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF nezvimwe.
Magetsi 220V 50 / 60Hz (10%)
Kushanda Kwemamiriro ekunze Kupisa 20 kusvika 30 ℃, Humidity 40% kusvika 60%
Muchina Dhayamu 3950 * 2150 * 1350mm
Kurongedza divi 4100 * 2250 * 1670mm
Garandi Mwedzi gumi nematanhatu kusanganisa zvinoshandiswa
Ricoh Dhinda Musoro
Kugamuchira grey nhanho Ricoh simbi isina simbi yemukati yekudziya indasitiri musoro iyo ine yakakwira kuita mukumhanyisa uye kugadzirisa. Inokodzera kushanda kwenguva yakareba, maawa makumi maviri nemaviri achimhanya.
ChiGerman IGUS Energy Chain
Kushandisa Germany IGUS mbeveve kudhonza ngetani pane X axis, yakanakira kuchengetedza tambo uye machubhu ari pasi pekumhanya zvakanyanya. Nekwakakwira kuita, ruzha rwakaderera, ita kuti nzvimbo yekushanda ive yakasununguka.
Otomatiki Anti-Static Midziyo (Inesarudzo)
Otomatiki anti-static dhizaini yekudzivirira madonhwe eingi anodonhedza achibhururuka, ayo anoderedza inki pamusoro pekupfira inokonzerwa neyakagadzika, inatsiridza mhando yekudhinda pane imwe substrate.
Yese Simbi Yakabatanidzwa Muviri Sisitimu
Yese simbi yakasanganiswa yemuviri chimiro yakasimba kwazvo, haizo kuremara panguva yekufambisa. Kukanganisika kwekutendeseka kuri mukati me0.05 mm, kuve nechokwadi chekutwasuka uye kutwasuka.
Yakakwira Precision Screw Rod
Kugamuchira maviri-chikamu chakanyatsoita sikuru tsvimbo uye kupinza Panasonic servo synchronous motors, simbisa iyo screws tsvimbo pamativi ese eY axis synchronous kumhanya.
Chikamu Chikamu Aluminium Alloy Vacuuming Platform
Chikamu chekutsiva kubvisa chikuva, sarudza zviri nyore zvikamu zvekutsvaira, zvakanaka kune akasiyana masize ekudhinda akasarudzika; ichavandudza mashandisirwo ezvinhu.
UV akatungamirira Lamp
Otomatiki Kureba Kuyera
Otomatiki Kutanga Positioning
Ink Double Kukanganisa Kudzvinyirira Kudzora Sisitimu
Zvakanakira yedu UV flatbed yekudhinda muchina
1. UV flatbed printer inoshandisa Ricoh Gen5 printhead, isina prehead bhuti pakumhanya, chengetedza nguva nesimba;
2.Mwenje ye UV UV isina preheat bhuti pakumhanya, iine hupenyu hwakareba hwekushandisa, chengetedza nguva nesimba; 3. UV ink, zvakatipoteredza uye isina-hwema kuburitswa, kurapa nekukasira, uye kwete nyore kupera.
4.Iwe unogona kushandisa chena inki, ine yega kutenderera uye wega kubvunda basa, dzivisa chena inki kuti iwedzere uye kuisikidza iyo yekudhinda musoro;
5. UV flatbed printa Z-axis kukwirira kunogona kusimudza kumusoro uye pasi, iko kuripo kukwirira kwe100mm, kwakakwirira kunogona kugadzirwa;
6. UV flatbed printer hyperfine kudhinda uye kushanda kwakanyanya ne1440dpi;
Yakanaka aftersales sevhisi, ipa rubatsiro pa-line kana foni, uye nguva nenguva kushanya neemail.
UV flatbed printa Zvakadhindwa zvinhu zvinogona kunge zviri: girazi, zvedongo, siringi, aruminiyamu jira, huni bhodhi, musuwo jira, simbi pani, bhiribhodi, acrylic pani, Plexiglass, bepa bhodhi, furo bhodhi, PVC yekuwedzera bhodhi, mhete kadhibhodhi; zvinhu zvinoshanduka senge PVC, kanivhasi, machira, kapeti, inonamira noti, inoratidzira firimu, dehwe nezvimwewo zvese machira mapepa uye zvakaomeswa zvinhu.
UV printer yehuni inoshandiswa zvinhu
Iyo UV flatbed printer inoshandiswa kudhinda pagirazi, ceramic tile, PVC siringi, aluminium sheet, huni MDF bhodhi, simbi pani, bhiribhodi, acrylic pani, pepa bhodhi, furo bhodhi, PVC yekuwedzera bhodhi, chemarata makadhibhokisi, bamboo fiber board etc; uye nezve zvinoshanduka zvinhu zvakaita sePV, canvas, dehwe nezvimwe
Torera Ricon GEN5 piezoelectric kamwene, imwe kamwene 384/1280 kamwene, iko kurongeka kunogona kusvika 1440dpi, iyo nyowani inoshandura inki tekinoroji tekinoroji, inopa 7/14 / 21pl inki dot saizi, inogona kuwana yakakwira kumhanya kana yakaderera resolution kesi inogona zvakare nyore kuwana mhando yepamusoro mufananidzo, kuti uwane hapana poindi yekudhinda mhedzisiro.
Iyo Yemhando Yekutonga Sisitimu
NC saha muchina
lathe mubhedha kugadzirisa
muchinjikwa danda kugadzira
Sheet Simbi Kuputira
tafura kunyatso kuona
muchinjikwa danda kuona
1.Iyo yakareba sei mifananidzo yekudhinda ichagara panze uye mukati?
2. Ndeipi mutengo weinki wekudhinda pane izvo zvinhu?
3.Zvei nezve kudzikama uye mhando yemifananidzo yekudhinda?
4.Zve sei nezve maintance uye aftersales sevhisi?
5.Are iwe unogadzira kana mutengesi mumiriri?
6.Chero pane vimbiso yeichi printer?
7.Ndingaite sei kuisa uye kutanga kushandisa iyo printa?
Kazhinji isu tinoronga nyanzvi yekuisa uye kudzidzisa mufekitori yako. kana iwe unogona kuverenga bhuku revashandisi kuti unzwisise muchina. Kana iwe uchida chero rubatsiro, nyanzvi yedu inogona kukubatsira kuburikidza ne Teamviewer. Pese paunenge uine mibvunzo kumuchina, unogona Bata nyanzvi yedu kana ini zvakananga.
8.Can ndinogona kuwana zvekushandisa uye kupfeka zvikamu kubva kwauri?
9.Uchawana sei garandi?
10.Ndezvipi mhando zvezvinhu zvinoda kutanga usati wadhinda?
Pashure: UV Flatbed Wood Printer Machine yekutengesa YC2513L
Zvadaro: YC1016 Ceramic Tile Dhijitari Kudhinda Muchina
Ceramic Plate Kudhinda Muchina
Nameplate Kudhinda Mushini Kune Metal Plate
Tin Plate Kudhinda Machina